Gothic novel: chii icho, ndiani aive wekutanga munyori uye hunhu | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | 29/04/2021 18:26 | Zvinotyisa
Iyo Gothic inoverengeka yakabatana zvakanyanya nekutya. Nhasi, ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa, ayo asingawanikwe chete mumabhuku, asiwo mu cinema. Tine mareferenzi akawanda kumanoveli erudzi urwu, rwekutanga rwuri Nhare yeOtranto.
Asi, Chii chinonzi gothic novel? Unhu hupi hwayo? Izvo zvakashanduka sei? Tichazotaura newe nezve izvi zvese nezvimwe zvakawanda pasi apa.
1 Chii chinonzi gothic novel
1.1 Ndiani aive wekutanga munyori wechiGothic
2 Hunhu hweiyo Gothic novel
2.1 Mamiriro ezvinhu anosiririsa
2.2 Zvemweya zvinhu
2.3 Vanhu vane zvishuwo
2.4 Mamiriro ezvinhu
3 Iko kushanduka kwako kwave sei
Chii chinonzi gothic novel
Iyo Gothic inoverengeka, inonziwo Gothic rondedzero, inyaya yemhando. Dzimwe nyanzvi dzinozviona sechinhu chidiki, nekuti chakabatana zvakanyanya nekutyisa uye vanotenda kuti zvese zviri zviviri zvakaoma kupatsanura, kunyange kutovhiringidzika. Muchokwadi, chimwe chezvakataurwa zvakanyanya ndechekuti iyo inotyisa novel sezvatinoiziva nhasi yaisazovapo pasina gothic horror.
La nhoroondo yeGothic inoverengeka inotitora kuenda kuEngland, uye kunyanya kusvika kumagumo ezana ramakore rechiXNUMX uko kwakatanga kubuda nyaya, nyaya uye enganonyorwa izvo zvine hunhu hwakasarudzika: kuiswa munzvimbo imwechete yezvinhu zvemashiripiti, zvinotyisa nezvipoko, uko kwavakaita kuti muverengi atadze kunyatsosiyanisa izvo chaizvo nezvakange zvisiri.
Tichifunga nezvekuti iro regumi nemasere century raizivikanwa nenyaya yekuti munhu anga achikwanisa kutsanangura zvese zvaasina kunzwisisa achishandisa chikonzero, kuti mabhuku akapa vanhu chinetso, kuyedza kutsanangura zvine musoro zvakaitika (uye kazhinji zvaive zvisingaite ).
Chaizvoizvo, iyo gothic inoverengeka yakaiswa kubva muna 1765 kusvika muna 1820, makore umo vanyori vazhinji vakatanga kutarisa iyi yemhando yemhando uye vakatora matanho avo ekutanga (dzakawanda dzenyaya dzechipoko dzakachengetedzwa kubva panguva iyoyo).
Ndiani aive wekutanga munyori wechiGothic
Iwe unoda kuziva ndiani akanyora yekutanga Gothic novel? Zvakanaka zvaive Horace Walpole, munyori weThe Castle of Otranto, rakabudiswa muna 1764. Munyori uyu akasarudza kuyedza kusanganisa zvemukati medzidziso dzerudo neinovhero yazvino sezvo aifunga izvozvo, zvakasiyana, zvese zviri zviviri zvekunyepedzera uye zvechokwadi, zvichiteerana.
Nekudaro, akagadzira inoverengeka yakanangana neyekuMiddle medieval kudanana kuzere nezvakavanzika, kutyisidzira, kutuka, ndima dzakavanzika uye magamba asingakwanise kutakura mamiriro iwayo (ndosaka vaigara vachipera simba, chimwe chimiro chenyaya).
Ehe, aive wekutanga, asi kwete ega. Mazita saClara Reeve, Ann Radcliffe, Matthew Lewis ... vane hukama zvakare negothic novel.
MuSpain tine mamwe mareferenzi emhando iyi muJosé de Urcullu, Agustín Pérez Zaragoza, Antonio Ros de Olano, Gustavo Adolfo Bécquer, Emilia Pardo Bazán kana José Zorrilla.
Hunhu hweiyo Gothic novel
Iye zvino zvaunenge uchiziva zvishoma nezve iyo Gothic inoverengeka, iwe zvechokwadi unoda kuziva kuti chii chinoratidzira icho. Uye ndizvozvo, chirevo che "gothic" chakaiswa nekuti mune dzakawanda dzinotyisa nyaya dzakaonekwa, mamiriro acho akadzokera kunguva dzepakati, kugarisa ivo protagonists, kungave mune imba huru, mushe mune nhare, nezvimwe. Zvakare, makoridho, maburi, makamuri asina chinhu, nezvimwe. vakaita kuti vanyori vagadzire marongero akakwana. Ndipo pakabva izwi riya remhando iyi.
Asi chii chinoratidzira iyo Gothic inoverengeka?
Mamiriro ezvinhu anosiririsa
Sezvatakambokuudza kare, isu tiri kutaura nezvenguva dzepakati kana nzvimbo sedzimba, dzimba, dzimba dzekunamatira dzakapa mweya wakasiyiwa, wakaparadzwa, wakasuruvara, uye wakaroya ...
Asi havazi ivo chete nzvimbo. Masango, matope, nzira dzakasviba, crypts ... Muchidimbu, chero nzvimbo iyo munyori akakwanisa kugadzira mamiriro angave anopa kutya chaiko.
Chimwe cheakakosha maitiro ezvinyorwa zveGothic, pasina mubvunzo, izvo zvemweya zvinhu, senge zvipoko, zvisina kufa, zombies, zvikara ... Vangave vanonakidza mavara, hongu, asi nguva dzose padivi rekutyisa, avo kana iwe sangana navo vanokupa kutya kukuru. Muchiitiko ichi, vampire vanogona zvakare kukwana mukati meiyo genre.
Vanhu vane zvishuwo
Kuti ugadzire zviri nani nyaya, vanyori vazhinji vaishandisa kushandisa mavara aive akangwara, akanaka, anoremekedzwa ... Asi, zvakadzika pasi, nechakavanzika chinovadya, vachishushikana nezvido zvavo, izvo zvavasingade kuburitsa uye izvo, munhoroondo yese, zviri kuitika zvinoita kuti chavo chechokwadi chiratidze. Uye zvakare, aya mavara, kuvapa iwo "exotic uye yakashongedzwa" nuance, yaimbova nemazita ekunze uye ane maruva.
Mune ino kesi, ingangoita nguva dzose mumanoveli isu tinowana katatu: munhu akaipa anokudzwa, angave ari njodzi, kutya, kutya; musikana asina mhosva; uye pakupedzisira gamba, rinoedza kumununura kubva pakutya ikoko. Uye hongu, kune zvakare nhanho yerudo, kungave kubva kune akapfava, kusvika kune akawedzera.
Nguva yekufamba, nyaya idzo dzakare dzekare dzakaudzwa, nyika yekurota (yezviroto nehusiku), nezvimwe. izvi zvimwe zvezviitiko izvo zvinoshandiswawo mune yechiGothic inoverengeka, ichigadzira, pane dzimwe nguva, muverengi aigona kubva pachipo chake uye nekudaro mhanya chifukidzo chakakora chekufungidzira uye kusahadzika, mune zvimwe zviitiko zvichikonzera kuti munhu afungisise kana zvanyatsoitika muchokwadi.
Iko kushanduka kwako kwave sei
Kana isu iye zvino tichifunga nezveGothic inoverengeka yenguva, zvirokwazvo isu hatizoone zvakawanda zvakafanana nezvatakakuudza. Uye icho chinhu chakajairika sezvo, nekufamba kwenguva, iri genre rakashanduka.
Zvechokwadi, yakatanga kuita saizvozvo kubva muna 1810 kana zvakadaro, apo Gothic yakapa nzira yekutya kwemazuva ano, inozivikanwa nekutyisa kwepfungwa. Ndokunge, zvakatanga kutora chimiro, kwete kungoonekwa kwezvipoko kana zvipoko, asi kuti ipinde mupfungwa dzemuverengi kuti aunze kutya mukati mawo, ita kuti "zvityiso" zvisatombo fungidzirwa, asi kutendeuka, mamiriro, etc. Izvo zvinounza kunzwa kwekushushikana, kwekunyanyisa ... kusvika pakunzwa kufukidzwa mune iyo aura yezvakavanzika uye kutya.
Neichi chikonzero, iyo Gothic inoverengeka pachayo ndiyo yakanyorwa mukupera kwezana ramakore rechiXNUMX uye kutanga kwezana ramakore rechiXNUMX. Nhasi, nyaya dzinogona kuverengwa, kunyangwe dziri dzeiyo mhando, dzashanduka uye hadzisisina akawanda ehunhu hwekare hwaitsanangura zvinyorwa izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Zvinotyisa » Gothic inoverengeka